नेत्र भिजुअल बुद्धिमत्ता: तपाईंको ब्रान्ड भिजुअरी अनलाइन मोनिटर गर्नुहोस् Martech Zone
बुधबार, जुलाई 12, 2017 मंगलवार, जुलाई 11, 2017 Douglas Karr
नेत्र एमआईटीको कम्प्यूटर विज्ञान र कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशालामा सम्पन्न एआई / डीप लर्निंग अनुसन्धानमा आधारित एक स्टार्टअप विकासशील छवि मान्यता प्रविधि हो। नेत्रको सफ्टवेयरले केही अद्भुत स्पष्टताको साथ अघिल्लो असुरक्षित इमेजरीमा संरचना ल्याउँदछ। Mill०० मिलिसेकेन्ड भित्र, नेत्र्राले ब्रान्ड लोगो, छवि प्रसंग, र मानव अनुहार सुविधाहरूको लागि स्क्यान गरिएको छवि ट्याग गर्न सक्दछ।
उपभोक्ताहरूले सोशल मीडियामा हरेक दिन 3.5.। अरब फोटो साझा गर्छन्। सामाजिक रूप से साझा इमेजरी उपभोक्ता गतिविधि, रुचि, ब्रान्ड प्राथमिकता, सम्बन्ध, र महत्वपूर्ण जीवन घटनाहरु को बारे मा मूल्यवान अन्तरदृष्टि हो।
नेत्रमा, हामी एआई, कम्प्युटर दर्शन, र गहिरो शिक्षा मार्केटर्सलाई उपभोक्ताहरू पहिले नै के साझेदारी गर्दैछौं अझ राम्रोसँग बुझ्न मद्दतको लागि प्रयोग गर्दछौं; हाम्रो टेक्नोलोजीले ठूलो पैमानेमा छविहरू पढ्न सक्दछ जुन पहिले सम्भव छैन। यो हासिल गर्नका लागि हामी अनलाइन फेला पारिएको छविहरूको नमूनाको साथ शुरू गर्दछौं जुन विशेष लोगो समावेश गर्दछ। हामी त्यसोभए, एक स्टारबक्स लोगो लिन्छौं, र यसलाई प्रशिक्षण सेट सिर्जना गर्न धेरै फरक तरीकाहरू परिवर्तन गर्दछ जसले टेकलाई विकृत भएका स्टारबक्स लोगोहरू, वा कफि शप जस्ता भीड दृश्यहरूमा पहिचान गर्न अनुमति दिनेछ। त्यस पछि हामी कम्प्युटर मोडलहरूलाई जैविक सामग्रीको संयोजन र कृत्रिम रूपमा परिवर्तन गरिएका छविहरूको प्रयोग गरेर प्रशिक्षण दिन्छौं। रिचर्ड ली, सीईओ, नेत्र
तल छविको उदाहरण छ जुन नेत्र सफ्टवेयरले टम्बरलरबाट इन्जेस्टेड गर्‍यो। जे पनि क्याप्सन उल्लेख छैन उत्तर अंकित, नेत्रको सफ्टवेयरले फोटो स्क्यान गर्न र लोगोको उपस्थिति पत्ता लगाउन सक्षम गर्दछ रुचिको अन्य चीजहरूमा, निम्न सहित:
वस्तुहरू, दृश्यहरू, र पर्वतारोहण, शिखर सम्मेलन, साहसिक, हिमपात, र जाडो जस्ता गतिविधिहरू
White०--30 वर्षको एक सेतो पुरुष
उत्तर फेस ब्रान्ड लोगो% 99% आत्मविश्वासको साथ
नेत्रले ग्राहकलाई वेब-आधारित ड्यासबोर्डमा इमेजरी अपलोड गर्न र / वा ट्विटर, टम्बलर, पिन्टेरेस्ट, र इन्स्टाग्रामबाट प्राप्त गरिएको सामाजिक इमेजरीको विश्लेषणको लागि पहुँच प्रदान गर्दछ। सफ्टवेयर वेबमा आधारित ड्यासबोर्ड मार्फत वा ग्राहकको लागि वाणिज्य रूपमा उपलब्ध छ एपीआई उद्यम सफ्टवेयर कम्पनीहरूका लागि। नेत्रको कोर टेक्नोलोजी पनि छवि अनुक्रमणिका र खोज (डिजिटल सम्पत्ति प्रबन्धन) र दृश्य खोजी सहित लागू गर्न सकिन्छ।
प्रयोगकर्ताहरूले हेर्न सक्छन् विश्लेषण छवि ट्यागमा र मुख्य प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् जस्तो:
मेरो ब्रान्ड कहाँ इमेजरीमा देखिदै छ र कुन सन्दर्भमा?
कुन जनसांख्यिकी इमेजरीमा मेरो ब्रान्डको साथ संलग्न छ?
कुन डेमोग्राफिक्सले मेरो प्रतिस्पर्धीको ब्रान्डमा संलग्न भईरहेको छ?
कुन ब्रांड्स / ब्रान्ड उपभोक्ताहरू हुन् जुन मेरो ब्रान्डसँग स engage्लग्न छन्?
प्रयोगकर्ताहरूले सment्लग्नता स्तरको साथसाथै फोटोको प्रस on्गमा आधारित इमेजरी फिल्टर गर्न सक्दछन्। नेत्रसँग पनि सामाजिक मिडिया इमेजरीमा पोष्ट गरिएको सामग्रीमा आधारित कस्टम दर्शकहरू सिर्जना गर्ने क्षमता छ। उदाहरणका लागि, रिबोकले सफ्टवेयरको प्रयोग गरी उपभोक्ताहरूलाई लक्षित गर्न सक्दछन् जसले विगत दुई हप्तामा व्यायाम गतिविधिमा संलग्न आफ्नो फोटो पोस्ट गरेको उपभोक्ताहरूलाई लक्षित क्रसफिट द्वारा सक्रिय रूपमा कसरत गर्दछन्।
हामी विश्वास गर्छौं कि हामीसँग ब्रान्ड र लोगो पत्ता लगाउने मार्केटमा बेस्ट-इन-क्लास टेक छ। हामी आफैंलाई थप छवि मान्यता क्षमताहरूको साथ भिन्नता पनि गर्दछौं। त्यहाँ एक मात्र अर्को कम्पनी छ जुन ब्रान्ड, लोगो, वस्तु, दृश्य, र मानव गर्न सक्दछ, र त्यो गुगल हो। हाम्रो टाउको टाउको हेड टेस्टमा, हामी उनीहरू भन्दा दुई गुणा राम्रो प्रदर्शन गर्दछौं। नेट्राको दृश्य बुद्धिमत्ता समाधानले अवस्थित उपभोक्ता डेटा (उदाहरण प्रोफाइल जानकारी, पाठ क्याप्शन, कुकी डाटा) बढाउन अविश्वसनीय मूल्यवान डेटा प्रदान गर्न सक्छ जुन सामाजिक विज्ञापनदाताहरूले पहिले नै लाभ उठाएका छन्। रिचर्ड ली, सीईओ, नेत्र
व्यावहारिक अनुप्रयोगहरूले ब्राण्ड मोनिटरि,, सामाजिक सुन्ने, सामाजिक वकालत, प्रभावकारी मार्केटि,, मार्केटि research अनुसन्धान र विज्ञापन समावेश गर्दछ।
नेत्रको पहुँच अनुरोध गर्नुहोस्
टैग: aiब्रान्ड अनुगमनगहिरो शिक्षाअनुहार मान्यताछवि मान्यताइन्स्टाग्राममेशिन सिकाइनेत्रPinterestरूपरेखामान्यताReebokउत्तरी भागtumblrtwitterदृश्य छवि मान्यतादृश्य खोजी